Yemahara maFomu ePDF kwenguva yakati rebei | IPhone nhau
Ignacio Sala | | IPhone maapplication, Kutengesa
Nguva nenguva vamwe vanogadzira vanopa maapplication avo mahara zvachose kuitira kuti vashandisi vasingazvizive, vanogona kurodhaunura uye vozogovana zvavowo nevamwe vashandisi. Nezuro takataura newe nezve mafomu maviri kubva kunovandudza Toca Boca: Tinya Chiremba uye Penda mapapiro angu.
Nhasi kuchinjika kwemusimudziri Darsoft, uyo kwemaawa mashoma anotipa mahara kurodha pasi fomu rePDF mafomu, ayo Iyo ine mutengo wenguva dzose we8,99 euros. Kana iwe ukashandisa iyi yerudzi rwefaira uye Readdle's PDF Nyanzvi 5 hainyatso kukugonesa, kuve chikumbiro chakanakisa, Mafomu ePDF anogona kunge ari ako.
Mafomu ePDF anotibvumidza kuzadza, kusaina uye kududzira Adobe PDF mafomu uye zvinyorwa. Ichi chishandiso chishandiso chakasimba chekugadzirisa kune chero mushandisi anoda kubata mafomu mune aya fomati kana magwaro epamutemo. Mafomu ePDF anotibvumidza kuzadza mafomu, kuwedzera makomenti kana manotsi kugwaro. Asi zvinotibvumidzawo kubvunza zvinyorwa muPDF fomati yatakachengeta muGoogle Dirve kana Dropbox, mune yedu email account pamwe nekutibvumidza kuprinta magwaro akapedzwa uye akasainwa kuburikidza nemaprinta anoenderana neAirPrint.
PDF Mafomu maficha akakosha:
Tora zvinyorwa zvePDF kubva kune chero chishandiso uchishandisa iyo share share, kubva iTunes, Google Drive kana Dropbox.
Manage zvinyorwa mune iyi fomati uchishandisa akaomeswa mafaera uye maforodha muZIP fomati.
Saina magwaro epamutemo, kunyangwe zvibvumirano, zviziviso, zvibvumirano ...
Zadza nhamba huru yemafomu.
Gadzira mamaki uye makomendi pane chero faira rePDF kana chifananidzo chekuzotaura zvakare.
Izvo zvakare zvinotibvumidza isu kupatsanura iyo PDF faira mune akasiyana magwaro.
Kana tangozadza, kurongedza kana kusaina magwaro ari mubvunzo, tinogona kukurumidza kugovana neemail, Dropbox, Google Drive kana kudhinda navo zvakananga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mahara ePDF Mafomu kwenguva yakati rebei
Iwe haudi, ivo vangangoita 9 euros ekuchengetedza. Ini ndakanga ndisina kunzwa kuti mahara nhasi, maita basa zvikuru.
Gabriel garcia akadaro
Ini ndangoziva uye hazvicharatidzike mahara.
Pindura kuna Gabriel Garcia